7 अस्पताल, इजेभ्स्क समीक्षा
अस्पताल छनौट - एक कठिन प्रश्न हरेक expectant आमा समाधान गर्न। केही मामला भर र विषयमा बास छैन: प्रयास गर्नुहोस्। र धेरै महत्त्वपूर्ण कसैले कहाँ र के मा अवस्था पैदा हुनेछ बच्चा थाहा। मातृत्व अस्पताल को विकल्प त अक्सर विशेष ध्यान र trepidation संग उपयुक्त हो। प्रत्येक शहर मा, सामान्यतया त्यहाँ धेरै समान संस्थाहरू छन्। र तिनीहरू सबै आफ्नै विशेषताहरु र विशिष्ट सुविधाहरू छन्। यस लेखमा तपाईं के7अस्पताल सिक्न हुनेछ। इजेभ्स्क - यो शहर, छलफल गरिने। हरेक नयाँ आमा यी संस्थाहरू को इजेभ्स्क क्षेत्रमा के थाहा हुनुपर्छ? यो वितरण लागि राम्रो स्थान छ? यो सबै पछि छलफल गरिनेछ।
तपाईं expectant आमा ध्यान पहिलो कुरा, - मातृत्व अस्पताल को विवरण। यो ड्र भने, संस्थाले प्रसब मा एक भविष्य उपचार विकल्पको रूपमा मानिन्छ।
7 अस्पताल (इजेभ्स्क) - को उडमर्ट गणतन्त्र को एक perinatal केन्द्र। तपाईं विवरण विश्वास भने, त्यसपछि संस्थाले आफ्नो तरिका को केवल एक, expectant आमा को लागि outpatient र inpatient हेरविचार प्रदान छ। यहाँ यो एक गर्भावस्था सञ्चालन र जन्म दिन आमन्त्रित गरिएको छ।
निस्सन्देह, तपाईंले निःशुल्क श्रम, र सशुल्क चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै आमा को प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ। इजेभ्स्क7अस्पताल डाक्टर र सुडेनी सेवा, को एक विकल्प प्रदान गर्दछ भागीदारी प्रसब र घर उच्च।
जटिलता बदलिने को वितरण लिन संस्थाले मा डाक्टर। गर्भावस्था को पनि समस्या सफलतापूर्वक र आमा र बच्चालाई लागि नतिजा बिना पूरा गर्न सकिँदैन। कि perinatal केन्द्र को स्थिति प्रसब महिला आकर्षित छ। तर साँच्चै, यहाँ लागू गर्ने कि नगर्ने?
यो बुझ्न, तपाईं स्पष्ट के सेवा र सुविधा चिकित्सा सुविधा भेटी बुझ्न आवश्यक छ।7अस्पताल (इजेभ्स्क) - यो एक धेरै ठूलो संगठन हो। अस्पताल 176 मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ।
कार्यालय 13 टुक्रा छ। तिनीहरू सबै भर्खरै बनाएको आमा र नवजात शिशुहरु पालन गर्न मदत। क्लिनिक निम्न विभाग प्रदान गर्दछ:
गर्भावस्था को विकृति;
बच्चाहरु को लागि गहन हेरविचार;
रोग र अकाल शिशुहरू;
anaesthesiology र गहन हेरविचार (आमा को लागि);
केन्द्र आईवीएफ र प्रजनन।
यो गर्दा अस्पतालमा गर्भावस्था को समयमा भ्रमणहरू अनुमति छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। संपदा पनि प्रसारित गर्न सकिन्छ। यो 19 बजे देखि 10 हूँ, हरेक दिन के गर्न दिनुभयो। तदनुसार, अधिकतम सान्त्वना लागि perinatal केन्द्रमा महिला। अवस्था "जेलमा" छैनन्, जहाँ पनि आफ्नो नातेदार हेर्न अनुमति छैन। यो वास्तवमा धेरै expectant आमा प्रसन्न।
को 7th अस्पताल कहाँ छ? यो मुद्दा श्रम धेरै महिला लागि महत्त्वपूर्ण छ। म चयन गर्न चाहनुहुन्छ राम्रो प्रसूति अस्पताल, छ छैन टाढा घर देखि जो। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ केही लागि यो मापदण्ड छ।
अस्पताल7घरहरुमा जो शहर, - इजेभ्स्क। ठेगाना स्वास्थ्य सुविधा निम्न: Votkinskoye राजमार्ग, घर 57. यो perinatal केन्द्र अस्पताल नम्बर 1 तदनुसार छ कि उल्लेख गरिनु पर्छ संस्थाहरू नै ठेगाना हुनेछ।
हामी अस्पताल नम्बर7इजेभ्स्क मा भनेर भन्न सकिन्छ - अस्पताल नम्बर 1 तथापि, सेवाको गुणस्तर मा नकारात्मक प्रभाव को विभाग मध्ये एक छ, यो वास्तवमा प्रतिबिम्बित छैन।
र तपाईं कसरी अध्ययन संस्थाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यो सबै जहाँ आमा रहन मा निर्भर गर्दछ। तर जीवन विचार ल्याउन मदत गर्नेछ केही सुझाव छन्।
7 अस्पताल (इजेभ्स्क) को Votkinsk राजमार्ग, घर 57. रूपमा पहिले नै उल्लेख, शहर मा एक अस्पताल नम्बर 1 मा छ। तपाईं रेल स्टेशन जाने योजना भने सम्बन्धित स्टप बस नम्बर 19. गरेर केन्द्रिय बस स्टेशन पुग्न सकिन्छ गर्न, तपाईं बस नम्बर 22 वा नम्बर 49. पनि 57th बस मा "7th अस्पताल" बस स्टप प्राप्त गर्न प्रस्तावित छ लाग्न सक्छ।
केही थप विकल्प - को झगडे को समयमा एम्बुलेन्स एक चुनौती हो। वा तपाईंले ट्याक्सी वा निजी कार द्वारा संस्थाले गर्न ड्राइव गर्न सक्छन्। को पहिले उल्लेख ठेगानामा आइपुग्दा यो Suffice।
दर्ता लागि कागजातहरू
अस्पताल के ल्याउन नम्बर7(इजेभ्स्क)? महत्वपूर्ण बिन्दु अस्पताल मा नयाँ आमा को दर्ता लागि कागजातहरू सङ्कलन छ। किन यो प्रक्रिया को लागि तयार महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ।
को perinatal केन्द्र को आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको जानकारी आधारित, कागजात सूची स्थिति मा निर्भर गर्दछ। तपाईं प्राय तपाईं संग ल्याउन पर्छ:
रोजगार केन्द्र प्रमाण (को बेरोजगार लागि)।
अलग देखि आमा आवश्यक हुन सक्छ:
आपतकालीन अवस्थाहरू को आईडी कार्ड मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, को fps;
वैवाहिक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि।
नागरिक चिकित्सा स्थापना सँग सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न निर्णय भने श्रम सधैं लिनु आवश्यक हुनेछ। अन्यथा, यो सम्झौता अस्तित्व प्रमाणित गर्न असम्भव छ। यो एक महिला लक्जरी बिना अवस्थामा जन्म दिन हुनेछ भन्ने हो।
त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न
केही दिने जन्म महिलाहरु तिनीहरूले इजेभ्स्क मा7अस्पतालमा जन्म दिन त सजिलो छैन भन्छन्। यो कुरा perinatal केन्द्र मा एक निश्चित सिद्धान्त मा गिर गर्न प्रस्तावित छ भन्ने छ। उहाँलाई बारेमा यति प्रसिद्ध।
अस्पताल7(इजेभ्स्क) प्राप्त कसरी? यो त गाह्रो गर्नुहोस्। मुख्य कुरा - प्रक्रिया को लागि तयार।
माथिको देखि यो निष्कर्षमा हुन सक्छ अध्ययन चिकित्सा संस्था भनेर - विशेष अवस्था एक प्रसूति अस्पताल। यो ठाउँलाई धेरै चाँडै कब्जा छ कल्पित छ। को perinatal केन्द्र मा प्रवेश को प्रश्न किन जोडले rises छ।
सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका - डाक्टर संग सहमत छ (विधि अक्सर अभ्यास छ)। यो पनि एक चिकित्सा संगठन संग एक शुल्क को लागि एक सम्झौता प्रवेश गर्न प्रस्तावित छ। यस्तो परिदृश्य चिकित्सा संस्था को पर्खालहरु मा प्राप्त गर्न 100% मदत। केही आमाहरु, विशिष्ट फोन obstetricians प्राप्त प्रसब बारेमा व्यक्तिगत तिनीहरूलाई व्यवस्था कल र बनाउन सल्लाह छन्। सबै एक विशाल शिकार लिन।
7 antenatal क्लिनिक देखि अतिरिक्त पठाएर अस्पताल (इजेभ्स्क) मा प्राप्त गर्न सक्छन्। केटी को निवास वा ठाउँ। को7प्रसूति अस्पताल निःशुल्क स्थानहरू हुनेछ भने, एक महिला यो लिन आवश्यक छ। तर यो विकल्प कुनै पनि सेवा ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन।
अक्सर expectant आमा तपाईं इजेभ्स्क को perinatal केन्द्रमा निःशुल्क त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी सोच छन्। आखिर, सबै गर्न मनमोहक वितरण भुक्तानी गर्न हुनेछ। र सबैलाई मौका छ।
के गर्छ अस्पताल नम्बर7(इजेभ्स्क)? दिशा आवश्यक वा डाक्टर यहाँ प्राप्त गर्न देखि छ? भने गरिएको छ, यो सबै स्थिति मा निर्भर गर्दछ। निःशुल्क वितरण लागि, वा अस्पताल बचत गर्न बिल्कुल आवश्यक भएको उपस्थित चिकित्सक देखि prenatal सान्दर्भिक लिन छ। यसरी मात्र अस्पताल प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। यी समीक्षा अक्सर इजेभ्स्क मा जवान आमा को विभिन्न फोरम मा देख्न सकिन्छ।
तदनुसार, प्रायजसो, चिकित्सकको निर्देशन लिन हुनेछ। व्यवहार मा, पहिले नै उल्लेख रूपमा, तपाईं अनुगमन र वितरण मा कर्मचारी संग बातचीत गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। अस्पताल नम्बर7मा छ जो चिकित्सा स्थापना, मात्र एउटा सम्झौता - तपाईं मात्र भुक्तानी सेवा प्राप्त गर्ने योजना भने, त्यहाँ महिला कुनै अतिरिक्त जमानत आवश्यक छैन हो।
र सामान्य महिला मा अध्ययन चिकित्सा सुविधा बारे भन्न? के फाइदा र बेफाइदा, तिनीहरूले सबैभन्दा संकेत?
Rodd7(इजेभ्स्क) प्रतिक्रियाहरू एक किसिम पाए। तर ती सबै भन्दा सकारात्मक छन्। Perinatal केन्द्र तपाईं समस्या pregnancies संग महिलाहरु को वितरण मा सहयोग गर्न अनुमति दिन्छ। र यो वास्तवमा धेरै प्रसन्न। तपाईं त्यहाँ साँच्चै मदत गर्नेछ पक्का आफ्नो भाग्य त्याग्नुभएन हुन सक्छ। त्यहाँ एक संस्थाले मा गुणवत्ता हेरविचार लागि सबै उपकरण।
अस्पतालमा स्थिति ambiguously वर्णन गरिएको छ। एक हात मा, संस्था चिटिक्क, देखिन्छ सबै मरम्मत, गरेका छन् संगठन को पर्खालहरु मा हुन डर छैन। अन्य मा - केही छैन अस्पताल वातावरण सन्तुष्ट छन्।7अस्पताल (इजेभ्स्क), लेख मा प्रस्तुत छ फोटो जो, एक बच्चाको जन्म लागि राम्रो स्थान छ, तर यसको आफ्नै कमीकमजोरी। पाउनुभएपछि सङ्गठन टेम्पलेट सकिन्छ कि दाबी। किन?
यो कुरा आमा को भाग चिकित्सा कर्मचारी र डाक्टर को अशिष्ट मनोवृत्ति गनगन, छ, केही भोजन dissatisfaction evince। कसैले तिनीहरूले हलवे केही झगडे मा त्यागेर गरिएको कसरी र थियो घडी फिट थिएन बारेमा हरर कथाहरू बताउँछ। यो सबै मात्र होइन इजेभ्स्क प्रत्येक प्रसूति अस्पताल मा सुने गर्न सकिन्छ। सेवा सन्तुष्टि मानव कारक र व्यवहार र प्राथमिकताहरू parturient मा निर्भर गर्दछ।
नियम, जन्म नि: शुल्क दिन गर्नेहरूलाई, सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तसर्थ, अनावश्यक दावी, वृद्धि सान्त्वना accustomed जोगिन मानिसहरू प्रसूति अस्पताल7एक सम्झौता प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ अनि त्यसपछि हामी विशेष indifferent छोड्न जो हुनेछ, एउटा चिकित्सा सुविधा अवस्था आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य अस्पताल7(इजेभ्स्क) - यो जन्म दिन धेरै राम्रो स्थान छ कहिल्यै खाली छ। यो उत्तिकै राम्रो सहायता र एक शुल्क लागि, र नि: शुल्क। तर नकारात्मक अनुभव सबै 100% असम्भव बीमा। त्यसैले, हरेक महिला जन्म भएको 7th अस्पताल वा छैन दिन कि निर्णय गर्नु पर्छ।
एक वयस्क को तापमान कसरी कम गर्न र त्यो के चढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
जेनेटिक्स। Mendel पहिलो व्यवस्था
नुन कोठामा: यो के हो? प्रक्रिया गर्न सङ्केत गर्छ र contraindications, सामान्य सिफारिसहरू
मालिश प्याड Pranamat ईसीओ: समीक्षा
के wasps stings खतरनाक हो? त्यहाँ जवाफ छ!
किन महिना प्रारम्भिक सुरु?
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा रोलर: ठेगाना, खोल्ने समय र समीक्षा। सेन्ट पीटर्सबर्ग मा भित्री र बाहिरी बरफ rinks
एक मिंक कोट गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्न। को मिंक कोट गुणस्तर कसरी जाँच्न
डीजल particulate फिल्टरको सञ्चालन सिद्धान्त
MFP HP डेस्कजेट 2130: मालिकको समीक्षा, प्रौद्योगिकी विशेषताहरु र सुविधाहरू
आपातकालीन गर्भनिरोधक। दबाइ 'एस्कापेल'। परिणाम
वस्त्र देखि चुइगम कसरी हटाउने
कीराहरू - तिनीहरूले arthropods को प्रकार को प्रतिनिधिको छन्। संरचना र कामकाज को सुविधाहरू
बर्ज खलीफा - संसारको सबैभन्दा ठूलो भवन
Springtrapa आकर्षित गर्न कसरी विवरण
निर्देशन को उत्पादन को लागि: कसरी आफ्नो हातमा एक माइक्रोस्कोप निर्माण गर्न
Sholokhov, "मानिसको भाग्य": उत्पादन विश्लेषण
Pontus: इतिहास, सिक्का, सेना शासक। Pontus र काला सागर को इतिहास मा आफ्नो भूमिका